Multilayer ruffles voluminous ivame ukuhlobisa ezihlukahlukene izinhlobo izingubo textile ingaphakathi. Bona kungabonwa blouses, iziketi, sigqoka, Cardigans, imicamelo kanye bedspreads.
Ukuze knitters ngamakhono ukusebenza ngodobo, decor athakazelisa ngokukhethekile. Frill ngixhumane, okuyinto wesifunda ingatholakala kalula izincwadi, kuyinto snap obumbene, nakuba isikhathi eside.
Kususelwa ukubukeka amaphethini asetshenziswe ukunitha, zikhona eziningana ezinkulu izinhlobo ryushey:
elula nge imiphetho bushelelezi;
Kufinyeta, singasho ukuthi ruffles, frills futhi flounces abe isimiso ezivamile ukunitha. Umehluko itholakala enanini lama-elementi elandelanayo. Frill - a frills ambalwa noma flounces eduze. Ingqikithi ukukhiqizwa yabo wukuthi ubude uchungechunge lokugcina imidwebo ryusha kufanele sibe ngaphezu ubude kuqala.
Inani ngezinto zokwakha kanye namathuluzi
Ukukhiqiza imikhiqizo ehlanganisa ruffles akazange ihluke eziyinkimbinkimbi kakhulu, balukhulume ukukhilosha ngokwanele kokuqala. Ruffles (izifunda ukuba abantu babulawelwe kuzo zabo angaxhumana sanoma yisiphi) wenziwe ethambile, lokuluhlaza kuqhathaniswa mncane. I ukujiya elikhulu we ntambo ngoba ijezi imikhiqizo efudumele - 400 m / 100 g ukuze 600 m / 100 amagremu. Lapho ukunitha ehlobo wenza kusukela ukotini ntambo singasetshenziswa ngisho izacile - mayelana 700 m / 100 amagremu.
I zikanokusho le ntambo, kubalula kuyoba imidwebo. Ukwaluka frills kubaluleke kakhulu ekwakhekeni emphethweni enhle, ngakho kwabantu ukunitha kungcono ukukhetha ophansi. Ukuze uthintane ruffles ngixhumane (scheme ngaleyo ndlela azinandaba) engasitholi "lokhuni", ungasebenzisa hook inkudlwana kunalokho Kunconywa for ntambo abakhethiwe. Le nqubo wazibonela amakhosi ukuncoma Wabasaqalayo. Vala hook akusho qinisa ngendwangu.
frill obumbene hook dlala: incazelo wesifunda, ukusetshenziswa
I isithombe sikhombisa isikhwama nge umhlobiso ngesimo frills.
ukukhiqizwa yabo angabhekwa elula. Okunjalo hook iDemo ruffles, okuyinto wesifunda izokwethulwa ngezansi, abeke indwangu siphelile.
Njengoba isizathu kangcono igridi sirloin. ukunitha lakhe alternation amakholomu kanye sc (CCH) futhi izihibe ezingamashumi amabili emoyeni (CAP). Ngakho, ukuze uthole iyunifomu square amaseli. Uma uhlela ukuba obumbene ngaphezulu openwork Indwangu, ungakwazi ukwandisa isibalo sc imigoqo futhi, ngokufanelekile, inani vis phakathi kwazo.
Isifanekiso libonisa ruffles, ehlanganisa imigqa emibili. Kungenzeka ukuhlala endaweni eyodwa, uma intambo ukujiya okwanele isiphika ubukeka ephelele, noma engeza imigqa sesithathu nesesine. ' Ukwandisa ryusha ukuphakama, kufanele sikhumbule ukuthi inombolo eduze kumele okungenani ibe namagama angu- 1.5 izikhathi ezingaphezu izihibe kwalowo odlule. Ngokufanele - izikhathi 2.
Ukwaluka openwork ryushey
kufanele usebenzise uhlelo olukhethekile womshini lace frills. Flat openwork iphethini ngeke isebenze, ngoba ryusha ngendwangu kumele ukwandisa. Umuntu angathola ngomumo lithathelwe kohlelo noma insalela isekhula indwangu wathungela. Kaningi, napkins ehlotshisiwe kanye emaphethelweni komngcele ngentambo imigqa eziningana. Nakhu isayithi futhi kufanele lisetshenziswe nini. Inwebisa leaf isivele ifakwe kule scheme futhi ayidingi ukuba adala ubuchopho babo phezu kokusungulwa ibhayisikili.
Ngokuvamile ruffles hook (scheme esetshenziswa futhi obukhulu futhi usentekenteke) obumbene ukuhlobisa iziketi.
Le nto efanelekayo izingane kanye nemikhiqizo omdala. Yiqiniso, imininingwane imodeli ngayine inezidingo zayo, kodwa kukhona isici esivamile: indlela uxhumano Indwangu isiketi nge ruffles.
Indwangu wathungela isiketi loin anezikhala bese abeke ruffles ngixhumane (izinhlelo kangcono azithathe isiketi jumpsuit) equidistant komunye nomunye. Kufanele siqinisekise ukuthi imigqa lokugcina ryusha ngamunye udlulela ochungechungeni lokuqala okulandelayo.
Etholwe le ndlela eshiya ngobuningi yokubopha izimvu, ngesikhathi esifanayo engasindi, iselula emoyeni.
Ukwaluka izinaliti coveralls izinsana. imodeli jikelele
Indlela ukwenza icala for ifoni ngezandla zakho: umbono yasekuqaleni
Amagilebhisi - iyisithelo noma amajikijolo? amagilebhisi Vine. Incazelo amagilebhisi